My Collections!!!: September 2011
ဘွဲ့လွန်သင်တန်းများ၏ဆီမီနာများ၊ (Academic meeting) အကယ်ဒမစ်မီတင်များ၊ ရှေ့နေများ၏အချေအတင်ပြောဆိုငြင်းခုန်
ထထိုးကြ၍ပွဲဆူကုန်သည်မျိုးလည်းသတင်းများတွင်တွေ့ဘူးသည်။ အစည်းအဝေးခန်းများတွင်ဘဲဥပုံဒါမှမဟုတ်လေးထောင့်စပ်စပ်စားပွဲများခင်းထားရခြင်းမှာတယောက်နှင့် တယောက်ထမထိုးနိုင်ရန်ဖြစ်သည်ဟုဆရာမောင်စူးစမ်း၏
ကြောင်းပြသည်။ (Narrator)သတင်းနောက်ခံပြောသူကလဲအပြောကောင်းလှသည်။ ဤနိုင်ငံတွင်ကြောင်လေကြောင်လွင့်တသိန်း
ဘော့စ်ဟု　(Narrator)ကနာမည်ပေးထားသောကြောင်လေကြောင်လွင့်တကောင်၏နယ်မြေသတ်မှတ်ပိုင်ဆိုင်ပုံ၊ မယားယူထားပုံ၊ ကြောင်တို့၏
ဤအိမ်တွင်(၁၂) နှစ်ကျော်နေခဲ့သဖြင့် ၁၂ နှစ် ဤအလှူခံပုဂ္ဂိုလ်တို့အားဒါနပြုခဲ့သည်။
ကိုတွေ့ရတတ်သည်။ နောက်မှာစားရန်စောင့်နေသောေ ကြာင်များကစောင့်နေသော်လဲအော်ဟစ်ချင်း၊ ရန်ပြုချင်းအလျင်းမရှိ၊ အေးဆေးငြိမ်သက်စွာစားကြသည်ပိုထူးခြားသည်မှာ ယခင်လာစားဖူးသောေ ကြာင်က လာမစားဖူးသောကြောင်ကိုလမ်းပြခေါ်ဆောင်လာခြင်းပင်တည်း။ (အမျိုးဖြစ်ခြင်လဲဖြစ်မှာပေါ့နော်)
ကြားရလို့ချမ်းချမ်းနဲ့ထဖွင့်ကြည့်တယ်။ အိပ်ချင်းမူးတူးနဲ့တံခါးဖွင့်ကြည့်တာဘယ်သူမှမတွေ့။ အောက်ကို
“ဝတ” ကိုတွေ့ပီ၊ ဪမင်းလုပ်တာကိုး။ တံခါးကိုပုတ်ခါဖွင့်ပေးအောင်လုပ်ရမည်ကိုနားလည်သောကြောင်ပါတကား။
လူကိုမော့ကြည့်ပြီး၊ ညောင်ဟုတချက်အော်သည်။ မျက်စိတဲ့တဲ့ကြည့်ပြီးအော်ပုံကထူးခြားသည်။
ကျောင်းပိတ်ထားသော်လည်းသုတေသန( )လုပ်စရာ၊ အလုပ်များရှိသဖြင့်ကျောင်းကသွားနေရသည်။
လန့်သွားသည်။ နိုင်ငံတကာမှကျောင်းသားများရှိသောကျောင်းဖြစ်၍(မြန်မာလူမျိုးကို အထင်မသေးစေရန်ဟူသောစိတ်ကလေးနှင့်)အတတ်နိုင်ဆုံး
လုံးလေးတွေအဆုတ်ထဲမှာပြည့်နေကြောင်း၊ ဝါဂွမ်းစက်ရုံမှအလုပ်သမား၏အဆုတ်မှဝါဂွမ်းလုံးကလေးများ၊ အစရှိသဖြင့်။ .။
ဒါနဲ့အိမ်လဲပြန်ရောက်ရော၊ အိပ်ယာခင်း၊ ခေါင်းအုံးစွပ်များအကုန်ချွတ်ပြီးလဲသည်။ တခန်းလုံးဖုန်စုပ်စက်နှင့်အသားကုန်စုပ်ပလိုက်သည်။
အိပ်ယာပေါ်မှကြောင်မွှေးများကအိပ်ယာဘေးတွင် မနက်မိုးလင်းလင်းချင်းအိပ်ချင်မူးတူးနှင့်မရှာချင်၍အဆင်သင့်ထုတ်ထားလေ့ရှိသော အဝတ်အစားများပေါ်ကကြောင်မွှေးများ
ပြန်ချိန်စောနေ၍ဝတ ကိုမတွေ့၊ ယင်းအိပ်သောစောင်ကိုယူ၍ အခန်းအပြင်ကော်ရစ်ဒါထောင့်တွင်
ညဥ့်ကနက်လာပြီ၊ အအေးဓာတ်ကသိသိသာသာပိုကဲလာပြီ။ ( )ဖွင့်အိပ်သဖြင့်နွေးနွေးထွေး ထွေး အိပ်ပျော်သွားသည်။
မော့ကြည့်သည်၊ ညောင် ဟု အော်သည်၊ ဝင်ခွင့်တောင်းနေပြန်ပြီ။
သူနေရာသူနေမယ်ဆိုရင်မဆိုးပါဘူးဟုတွေး၍ကတ်ထူ၊ ဂျပ်ထူပုံးကိုအိမ်ထဲသွင်းအခန်းထောင့်မှာထားပေးလိုက်သည်။ ထူးထူးခြားခြားလုပ်စရာကလဲမရှိ၊ နဲနဲလဲအိပ်ချင်နေသေး၍ပြန်အိပ်လိုက်သည်။
မင်းအပြင်မှာအိပ်ပါဟုလူ လိုပြောပြီး၊ အိပ်ယာပုံးလေးရှိရာအပြင်ကော်ရစ်ဒါထောင့်သို့ပို့ပေးလိုက်သည်။
ခြုံလိုက်ချိန်ဝတ တံခါးခေါက်ပြီ၊ ထ၍ဖွင့်ကြည့်လိုက်သည်။
၅ မီးနစ်ခန့်ကြာသွားသည်ထင်သည်။ အကြာကြီးတချက်စိုက်ကြည့်ပြီး ဝတ လှုပ်ရှားလိုက်သည်။
လှေကားရှိရာသို့ဦးတည်သည်။ နောက်ကိုတချက်လှဲ့ကြည့်လိုက်သောဝတ ၏မျက်လုံးများကအဓိပ္ပာယ်ရှိလှသည်။
၁ပတ်၂ပတ်၊ လုံးဝမလာတော့၊ အက်ဆီးဒင့်တခုခုနှင့်
သူနှစ်သက်သော ငါး အနံ့အစာတို့နှင့်သေချာစွာဆေးကြောထားသောရေခွက်မှသန့်သန့်လေးများကို ဝတ စွန့်လွှတ်လိုက်ပြီ။
Forward Mail တစ်ခုမှရ၍ ပြန်မျှဝေပါသည်။ Posted by
October 12, 2010 8:25 AM
Q: ကျမ အသက် ၂၇ နှစ်အတွင်း ရောက်နေပါတယ်။ အိမ်ထောင်မရှိပါဘူး။ NGO တခုမှာ လုပ်နေပါတယ်။ မျက်နှာမှာ ဝက်ခြံပေါက်တာ လေးနှစ်လောက်ရှိပြီထင်တယ်။ အခုတော့ ပျောက်တယ်ဆိုတာ လုံးဝတော့ မဟုတ်သေးဘူး။ တခါတလေ ပေါက်သေးတယ်။ အရင်ထက် စာရင် အများကြီး သက်သာလာပါတယ်။ ခက်တာက ဝက်ခြံတော့ ပျောက်နေပါတယ်၊ အမဲစက်တွေ ထွက်လာတယ်။ တင်းတိပ်လိုပဲ။ အရမ်း စိတ်ညစ်ရတယ်။ ရာသီလည်း ပုံမှန်လာတယ်။ ဘာလို့ အဲလို ဖြစ်ရတာလည်းဆိုတာ နားမလည်တော့ဘူး။ ပျောက်ကင်းနိုင်တဲ့ နည်းများ လမ်းညွှန်ပေးပါ။ ကျမ ဝက်ခြံ ပျောက်တယ်ဆိုတော့ မြန်မာပြည်က ထုတ်တဲ့ မဒီ ဝက်ခြံ တင်းတိပ် ပျောက်ဆေးမှုန့်ကို လိမ်းလို့ပါ။ ကျမက အလွန် အသန့် အပြန့် ကြိုက်တဲ့ မိန်းကလေး တစ်ယောက်ပါ။
A: Acne ဝက်ခြံဆိုတာ ဆရာဝန်တွေ အတော်လေး အမေးခံရ ကုပေးကြရတဲ့ ရောဂါ တခုပါ။ နာတာရှည်လဲ ဖြစ်တယ်။ လူငယ်-လူရွယ်တွေ ၈၅% မှာ ဖြစ်ကြရတယ်။ ဝက်ခြံ ဆိုတိုင်း အတူတူနဲ့ အနူနူ မဟုတ်ပါ။ အရောင် မတူကြဘူး။ Red bumps, Whiteheads, Blackheads အနီ-အဖြူ-အနက်။ မတူဘူးဆိုတာက ကုရာမှာလဲ မတူဘူး။ အဖြူနဲ့ အနက်တွေက (ပလပ်) တွေလိုဘဲ။ မွေးညင်းအိတ် ပိတ်နေရင် အဖြူ၊ ပွင့်နေရင် အမဲ။ ရင်းနေရင် အနီ။ Pus ပြည်ရှိနေတာပါ။ ဝက်ခြံ ဆိုတာက မွေးညင်းအိတ်၊ ချွေးထွက်အိတ်နဲ့ မွေးညင်း၊ ၃ မျိုး ဆက်စပ်နေတယ်။
Sebaceous glands ချွေးထွက်အိတ်တွေကနေ Sebum ဆိုတာ ထုတ်ပေးနေလို့ အသားအရေ စိုစွပ်နေစေတယ်။ မြီးကောင်ပေါက် အရွယ်ရောက်ရင် Androgens ဟော်မုန်း တန်ခိုးနဲ့ ပိုထွက်တယ်။ အသက် ၂ဝ ကျော်မှ ပြန်ကျတယ်။ ချွေးနဲ့ အတူ (ဆဲလ်) အပျက်အစီးတွေပါ ရောထွက်လာတယ်။ ဒီတော့ အိတ်မှာ ပြည့်နေမယ်။ ဘေးက အရေပြားကို ပြန့်နှံ့လာစေတယ်။ မျက်နှာအဆီပြန်တယ် ပြောကြတာပေါ့။ ဒီအတိုင်းသာ ဖြစ်နေရင် ဘာမှ ပြဿနာ မပေါ်ဘူး။
အရေပြား (ဆဲလ်) တွေက ပိုကပ်စေးမှု ဖြစ်လာတာ၊ အိတ်ထိပ်ပိုင်းမှာ ပိုများလာတာ၊ ချွေးထွက်များလာတာဆိုရင် ဒုက္ခ စပေးတော့မယ်။ P. acnes ဆိုတဲ့ ဗက်တီးရီးယားတွေ များပြားလာမယ်။ ရောဂါအဆင့်တော့ မရောက်သေးဘူး။ ဒီအဆင့် ဆိုရင် Benzoyl peroxide ဆေးနဲ့ ဗက်တီးရီးယားတွေကို နှိမ်နိုင်တယ်။ Salicylic acid 2% လိမ်းဆေးက စေးကပ်မှုကို တားပေးမယ်။
တကယ်လို့ ထွက်ပေါက်ကျဉ်းပြီး ပိတ်လာရင် Whitehead (Closed Comedone) “ဝက်ခြံ-ခေါင်းဖြူ” ဆိုတာ ဖြစ်လာမယ်။ အပေါက်ပွင့်နေသေးရင် Blackhead (Open Comedone) “ဝက်ခြံ-ခေါင်းမဲ” ခေါ်တယ်။ ပိုးကိုသေအောင် ပဋိဇီဝ စားဆေး၊ လိမ်းဆေး သုံးရမယ်။ Tetracycline, Erythromycin, Minocycline, Doxycycline, Clindamycin ဆေးတွေ ဖြစ်တယ်။
ဝက်ခြံကို အဆင့်ဆင့် ခေါ်သေးတယ်။ Acne Pimple ဆိုတာ ဗက်တီးရီးယားကြောင့် ဘေးကအရေပြားကို ရောဂါ ရလာတဲ့ အဆင့်၊ Red bump နီပြီး ဖေါင်းလာမယ်။ ပဋိဇီဝဆေးကို သေခြာပေါက် ပေးရမယ်။ Acne Pustule ဆိုတာ ပြည်တည် လာတာကို ခေါ်တယ်။ Acne Cyst ဆိုတာကတော့ အိတ်တခုလို ပိုကြီးလာတာပါ။
ကုရတာက လာမယ်-ကြာမယ် အစားဖြစ်ပါတယ်။ ဝက်ခြံ စဖြစ်တာ အရွယ်ရောက်ချိန်ကြမှမို့ အရွယ်ရလာရင် ပျောက်မှာ သေခြာတယ်။ အရွယ်ဆိုတာလဲ ဟော်မုန်းနဲ့ သိပ်ဆိုင်တယ်။ ဝက်ခြံနဲ့ပါတ်သက်တဲ့ ဟော်မုန်းက အသက်နဲ့တင် မကဘူး၊ လိင်စိတ် ပြောင်းတာ၊ ကျား-မ ဆက်ဆံတာ၊ အိမ်ထောင်ကျတာ၊ ကိုယ်ဝန်ရှိတာ စတဲ့ အခြေအနေမျိုးတွေကို လိုက်တယ်။ ဝက်ခြံရှိနေသူဟာ “နုပျို-သစ်လွင်သေးတယ်” ဆိုတဲ့ ပြရုပ်အစစ် ဖြစ်ပါတယ်။
ဝက်ခြံ ရောင်စုံတွေအတွက် Skin Care အရေပြားကို ဂရုစိုက်ဘို့ လိုပါတယ်။ ဂရုစိုက်ယုံနဲ့ ပျောက်မယ် ပြောတာတော့ မဟုတ်ပါ။ အစားအစာကြောင့်ဖြစ်တာ မဟုတ်လို့ အစားကို ထည့်ပြောတာ နည်းလမ်းမကျပါ။ အဆီတွေ၊ (ဆဲလ်) အသေတွေ ရှင်းအောင်လို့ သိပ်မပြင်းတဲ့ ဆပ်ပြာနဲ့ မျက်နှာသစ်ပါ။ Oil-based makeup ဆီနဲ့လုပ်တဲ့ မိတ်ကပ် မသုံးပါနဲ့။
ဆရာဝန်တွေက မဟုတ်ဘဲ အတွေ့အကြုံ ရှိသူတွေပေးတဲ့ နည်းတွေပါ ရေးပါရစေ။
Tip 1: ရေ ဖန်ခွက် ၃-၄ ခွက်ကို ကျိုပြီး Soda bicarbonate ဆိုဒါမှုံ့ လက်ဖက်ရည်ဇွန်း ၂ ဇွန်းထည့်ပါ။ မျက်နှာသုတ်ပုဝါကို အဲဒီအထဲ စိမ်ပြီး မျက်နှာပေါ် ၅-၆ ခါ အုပ်ပါ။ နောက် ဆန်မှုံ့ လက်ဖက်ရည်ဇွန်း ၁ ဇွန်းနဲ့ Curd ဒိန် ၁ ဇွန်းကို ရောပြီး လိမ်းပေးပါ။ နောက်ဆုံး ရေအေးနဲ့ မျက်နှာသစ်ပါ။
Tip 2: အလှဆီ-ဆပ်ပြာ Glycerin soap နဲ့ ဆားနဲနဲ ရောပြီး သုတ်လိမ်းပါ။ ၁ ပါတ် ဆက်လုပ်ပါ။
Tip 3: နံနံပင် အရွက်ကို အရည်လုပ်၊ လက်ဖက်ရည်ဇွန်း ၁ ဇွန်းနဲ့ နံနွင်းမှုံ့ လက်ဖက်ရည်ဇွန်း တဝက် ရောပါ။ ညအိပ်ရာဝင်မှာ လိမ်းပေးပါ။ မနက်လင်းရင် မျက်နှာသစ်ပါ။ ၁ ပါတ် ဆက်လုပ်ပါ။
Tip 4: သံပရာရည် လက်ဖက်ရည်ဇွန်း ၁ ဇွန်းနဲ့ သစ်ကြံပိုးအမှုံ့ လက်ဖက်ရည်ဇွန်း ၁ ဇွန်းရောပါ။ ညအိပ်ရာဝင်မှာ လိမ်းပေးပါ။ မနက်လင်းရင် မျက်နှာသစ်ပါ။ ၁ ပါတ် ဆက်လုပ်ပါ။
ဆရာဝန်မလိုတဲ့ နောက်နည်းတွေကလဲ စိတ်ဝင်စားကြမယ် ထင်ပါတယ်။
• ရေနွေး ဖန်ခွက် ၄ ပုံ ၁ ပုံထဲကို ဆားခါး Epsom salt (Magnesium sulfate) လက်ဖက်ရည်ဇွန်း ၁ ဇွန်း နဲ့ Iodine အိုင်အိုဒင်း ၄ စက် ရောထည့်ပါ။ အေးလာတဲ့အခါ ဂွမ်းစလေးနဲ့ ဖြစ်တဲ့နေရာတွေကို လိမ်းပေးပါ။ ခြောက်သွေ့ချိန်မှာ အဝတ်သန့်သန့်နဲ့ ရှင်းပြစ်ပါ။
• Methi (Fenugreek) leaves ပဲနံ့သာရွက် လတ်လတ် ဆတ်ဆတ်ကို ရေနဲ့ရော ချေပြီး၊ ၁ဝ-၁၅ မိနစ် လိမ်းပေးပါ။
• သံပရာရည် လက်ဖက်ရည်ဇွန်း ၁ ဇွန်း နဲ့ ကျိုတားတဲ့ နွားနို့ တဖန်ခွက်ထဲ ရောပြီး လိမ်းပါ။
• နံသာနီ Red sandalwood5gm နဲ့ Cinnamon powder နနွင်းမှုံ့5gm ရောပါ။ နွားနို့ နဲနဲပါ ထည့်ပါ။
• Almond powder ဗာဒံစေ့ အမှုံ့ကို ရေနဲ့ ရောပြီး လိမ်းပေးပါ။
• ဆား၊ ပျားရည် နဲ့ သံပရာရည် ဆတူရော လိမ်းပါ။ Yogurt ဒိန်ချဉ်လဲ ထည့်နိုင်တယ်။
• ပျားရည် ခပ်နွေးနွေးနဲ့ မျက်နှာသစ်နိုင်တယ်။
• မြေပဲဆီ သံပရာရည် ဆတူရောပြီး လိမ်းပါ။
• ကြက်ဥအကာ (အဖြူ) လိမ်းပါ။
• ပျားရည် လက်ဖက်ရည်ဇွန်း ၃ ဇွန်း နဲ့ Cinnamon powder နနွင်းမှုံ့ လက်ဖက်ရည်ဇွန်း ၁ ဇွန်းရောပြီး လိမ်းပါ။
အလှအပနဲ့ကျန်းမာရေး မြန်မာလို စာမျက်နှာတွေမှာလဲ ဘိုလိုရေးတာတွေနဲ့ မကွာတာကို သတိထားမိတယ်။ သူ့ဆီက ကိုယ်ယူတာလား၊ ကိုယ့်ဆီက သူယူတာလား မသိပါ။ အကြံတူ-ဥာဏ်တူတွေလဲ ဖြစ်နိုင်ပါတယ်။
(“တင်းတိတ်” အကြောင်း သပ်သပ် ရေးပါရစေ။)
´နက္ခတ်ကို မျှော်လင့်စောင့်ဆိုင်းနေတဲ့ လူမိုက်ကို ကောင်းကျိုးတွေက ကျော်လွန်သွားတယ်။ ကိုယ်ရှာဖွေနေတဲ့ ကောင်းကျိုးကသာ အကျိုးအတွက် နက္ခတ် မည်တယ်။ ကောင်းကင်က နက္ခတ်တာရာ တွေက ဘာအကျိုး ပြီးစေနိုင်မှာလဲ´။( ဇာတက၊ ဧကက၊၅၊ အတ္ထကာမ၀ဂ္ဂ၊ ၉၊ နက္ခတ္တဇာတက)ဒီစကားကို မြတ်စွာဘုရားက အာဇီဝကတစ်ယောက်ကို အကြောင်းပြုပြီး ဟောတော်မူပါတယ်။ သာဝတ္ထီမြိုံက အမျိုးသမီးတစ်ဦးကို ဇနပုဒ်က အမျိုးသားတစ်ဦး က သူ့သားအတွက် စကားကြောင်းလမ်းပြီး "ဘယ်နေ့မှာ လာခေါ်ပါ့မယ်"လို့ နေ့ကို သတ်မှတ်ပေးလိုက်ပါတယ်။ အဲဒီနေ့ရောက်တော့ သူ့အိမ်မှာ ကြွ လာ လာလေ့ ရှိတဲ့ အာဇီဝက တက္ကတွန်းကို "အရှင်ဘုရား ၊ ဒီနေ့ တပည့်တော်တို့ မင်္ဂလာတစ်ခု ပြုကြပါမယ်။ နက္ခတ် ကောင်းပါသလား"လို့ မေးပါတယ်။ အဲဒီ တက္ကတွန်းက " ဒီ ဒကာဟာ ငါ့ကို အရင်မမေးဘဲနဲ့ နေ့သတ် မှတ်ပြီး အခုမှ ငါ့ကို လာမေးတယ်၊ ရှိပစေ၊ ငါပညာပြလိုက်မယ်" လို့ စိတ်ဆိုးကာ "ယနေ့ နက္ခတ် မကောင်း ဘူး။ ဒီနေ့ မင်္ဂလာ မလုပ်နဲ့လုပ်ရင် အကြီးအကျယ် ပျက်စီးလိမ့်မယ်" လို့ ပြောပါတယ်။အဲဒီအိမ်က လူတွေက အဲဒီတက္ကတွန်းကို ယုံကြည်ပြီး သတ်မှတ်ထားတဲ့နေ့မှာ မင်္ဂလာပွဲကို မသွား ကြပါဘူး။ မြို့ကလူတွေက မင်္ဂလာ ကိစ္စအားလုံး ပြုလုပ်ပြီး သူတို့ မလာတော့တာကို သိလို့ "သူတို့ပဲ ဒီနေ့ကို မင်္ဂလာပွဲနေ့ အဖြစ် သတ်မှတ်ထားတယ်။ အခုတော့ သူတို့ မလာကြဘူး။ ငါတိုံမှာလည်း ပျက်စီးမယ့် အလုပ်ကို အများကြီးလုပ်ထားတယ်။ သူတို့နဲ့ ဘာအကျိုးရှိမှာလဲ။ ငါတို့ရဲ့ သမီးကို အခြားသူအား ပေးမယ်လို့ ဆုံးဖြတ်ကာ ပြင်ဆင်ထားတဲ့ မင်္ဂလာပွဲနဲ့ အခြားသတိုးသားနဲ့ ပေးစားလိုက်ပါတယ်"။နောက်တစ်နေ့ အမျိုးသားဘက်က လူတွေက လာပြီး "ငါတို့အား သတို့သမီးကို ပေးပါ" လို့ ပြောကြ တယ်။ အဲဒီအခါမှာ အမျိုးသမီးဘက်က လူတွေက "သင်တို့ဟာ ယုတ်မာတဲ့ လူတွေ ဖြစ်လို့ နေ့ရက် သတ်မှတ်ပြီး အထင်သေးလို့ မလာကြဘူး။ လာလမ်းနဲ့ပဲ ပြန်ကြပေတော့၊ အခြားအမျိုးသားအား သမီးကို ပေးလိုက်ပြီ" လို့ ပြောကာ ဆဲဆို ကြပါတယ်။ နှစ်ဦးနှစ်ဖက် စကားများ အငြင်းပွားကြပါတယ်။ အမျိုးသမီးကို မရဘဲ အမျိုးသားဘက်က ဇနပုဒ်သားတွေဟာ လာလမ်းနဲ့ပဲ ပြန်သွားကြရပါတယ်။အဲဒီအာဇီဝ တက္ကတွန်းကြောင့် အဲဒီလူတွေရဲ့ မင်္ဂလာကိစ္စ ပျက်သွားရတဲ့အကြောင်းဟာ ရဟန်းတွေရဲ့ အလယ်မှာ ထင်ရှားပါ တယ်။ ရဟန်းတွေက တရား သဘင် မှာ အဲဒီမင်္ဂလာကိစ္စအကြောင်း ပြောကာ ထိုင်နေ ကြပါတယ်။ ဘုရားက "ဘာစကားတွေ ပြောပြီး ထိုင်နေကြတာလဲ" လို့ မေးလို့ အဲဒီ အကြောင်းကို လျောက်ထား ပြကြပါတယ်။ " အခုမှသာ အာဇီဝက ကသာ မင်္ဂလာ ကိစ္စကို အန္တရာယ်ပြု ခဲ့တာ မဟုတ်ဘူး။ရှေးကလည်း လုပ်ခဲ့တယ်" လို့ မိန့်ကာ အတိတ်ဇာတ်ကြောင်းမှာ ဘုရားအလောင်း တော်ဖြစ်တဲ့ ပညာရှိမြို့သားက အထက်မှာ ဖော်ပြခဲ့တဲ့ စကားကို ပြောကြားပါတယ်။နက္ခတ်ကောင်း၊ အခါကောင်း၊ အချိန်ကောင်း၊ နေ့ရက်ကောင်း တွေကို ရွေးကြတဲ့ ပုဂ္ဂိုလ်တွေအတွက် မှတ်သားလိုက်နာစရာ ဖြစ်ပါတယ်။ နက္ခတ်ကောင်း ၊ အချိန်ကောင်း၊ နေ့ရက်ကောင်းက ကောင်းကျိုးကို ပေးနိုင်တာမဟုတ်ပါဘူး။ အလုပ်ကောင်း၊ အပြောကောင်း၊ အကြံကောင်း၊ စိတ်ထားကောင်းတွေရှိရင် နံနက်ရှိက အဲဒီနံနက်ဟာ ကောင်းတဲ့ နံနက်ခင်း၊ နေလယ်ရှိက အဲဒီနေ့လယ်ဟာ ကောင်းတဲ့ နေ့လယ်ခင်း၊ ညနေရှိက အဲဒီ ညနေဟာ ကောင်းတဲ့ ညနေခင်းပါပဲ။ကောင်းကျိုးတွေကို ကောင်းကင်က နက္ခတ်တွေက မပေးနိုင်တာကို လူတွေဟာမသိဘဲ နားမ လည်ဘဲ ဖြစ်နေကြပါတယ်။ ကိုယ့်ရဲ့ အလုပ်ကောင်း၊ အပြောကောင်း၊ အကြံကောင်း၊ စိတ်ထားကောင်း တွေကပဲ ကောင်းကျိုးတွေကို ပေးနိုင်တယ်ဆိုတာကိုလည်း နားမလည်ဘဲ ရှိနေကြပါသေးတယ်။ ကောင်းကျိုးတွေရဲ့ အကြောင်းမှန်ကို မရှာကြံနိုင်၊ မသိရှိနိုင် ဖြစ်နေကြပါတယ်။ မသိ နားလည်သူတွေက နက္ခတ်ကောင်း၊ အချိန်အခါကောင်း၊ နေ့ရက်ကောင်းကို မရွေးချယ်နိုင်ကြပါဘူးအချိန်အခါ၊ နေ့ရက်၊ နက္ခတ်ကောင်းဖို့ဆိုတာ အလုပ်၊ အပြော၊ အကြံ၊ စိတ်ထားတွေ ကောင်းရ ပါတယ်။ ကာယကံ၊ ၀စီကံ၊ မနောကံဆိုတဲ့ ကံသုံးပါး မကောင်းရင် နက္ခတ်လည်း မကောင်း။ အချိန်အခါနေ့ ရက်လည်း မကောင်းပါဘူး။ ကောင်းကျိုးလည်း မရနိုင်ပါဘူး။ ကောင်းကျိုးကို လိုချင်ရင် ကံကောင်းဖို့ပဲ လိုပါတယ်။ ကံအကြောင်း ကောင်းရင် ကောင်းကျိုးတွေကို ရဖို့ တောင့်တ နေစရာတောင် မလိုပါဘူး။ သူ အလိုလို ရောက်လာပါလိမ့်မယ်။ ကံကောင်းသူတွေ ဖြစ်အောင် ကြိုးစားဖို့ပဲ လိုပါတယ်။အားလုံး ကံကောင်းတဲ့သူတွေ ဖြစ်အောင် ကုသိုလ်ဖြစ်မဲ့ အလုပ်ကောင်း ၊ အပြောကောင်း၊ အကြံ ကောင်းများ ဖြစ်အောင် ပြုလုပ်ဆောင်ရွက်နိုင်ကြပါစေ။သာမဏေကျော်
“သမုဒ္ဒရာ ရောက် က သောက်မရတော့ချေ” ကျေးဇူးရှင် ညောင်ပင်ကန် ဆရာတော်ဘုရားကြီးဆရာတော်ကြီးက ဘာကို ဆိုတာလဲ အတိအကျ နားမလည်ပေမယ့် သမုဒ္ဒရာ ရောက် က သောက်မရတော့ပါ ဆိုတဲ့ စကားကလေးက စိတ်ထဲ အမြဲစွဲလို့ နေခဲ့ပါတယ်။ ကျွန်တော် ကတော့ သည်လို တွေးကြည့်မိပါတယ်။မွေးကတည်းက ဆီးနှင်းတောင်ဖျားက တသွင်သွင်စီးခဲ့တဲ့စိမ့်ရေ၊စမ်းရေ စမ်းချောင်းရေ ဘ၀ နဲ့ ချိုမွှေးအေးမြ စီးဆင်းနေခဲ့ရာက အရွယ်ကလေးလဲရောက်ရော၊ ဒလဟော အထိန်းအကွတ်မဲ့ နောက်ကြိစွာစီးဆင်း တဲ့ မြစ်ရေဘ၀ ကို ခံယူလိုက်ကြပါလေရော။ အဲဒီ အချိန်ထိ ချိုနေ ပါသေးတယ်။အသုံးဝင် နေပါသေးတယ်။အဲ ပင်လယ် ထဲ ရောက်ပြီ ဆိုမှဖြင့် ဘယ်လောက် ချိုတဲ့နေရာကလာလာ၊ ဘယ်လိုပဲ အသုံးဝင်ခဲ့ ၀င်ခဲ့ ဆားငံရေဘ၀ ကို ချက်ခြင်း အသွင် ပြောင်းရောက်သွားကြတာချည့်ပါ။သမုဒ္ဒရာ ရောက် မှဖြင့် ငယ်ငယ် တုန်းက ချိုခဲ့ပါတယ်။လို့ ပြောနေလည်း အပိုပါဘဲ။မိဘကျေးဇူး ဆိုတာလည်း မိဘတွေ ရှိနေတုန်းသာ စိမ့်ရေ၊ စမ်းရေ ၊ မြစ်ချောင်းရေ ဘ၀ ချိုနေနိုင်တာပါ။ဒါတောင် မိဘအပေါ် ထားနိုင်တဲ့ စိတ်ထားက ချစ်သူရည်းစား ကြင်သူ မရှိ ခင်မှာ စိမ့်ရေ၊စမ်းရေလို ချိုနိုင်ပေမယ့် ကိုယ့်ခြေပေါ်ကိုယ်ရပ် အိမ်ထောင်ခွဲပြီ ဆိုတာနဲ့ မြစ်ရေ လို ဒလဟော နောက်ကျိနေတဲ့ ရေချို မျိုးပါ။ဒါပေမယ့် ဒါလည်း ချိုတော့ချိုနေပါ သေး တယ်။မိဘ ကျေးဇူး ကို ဆပ်ပိုင်ခွင့် ရှိနေပါသေးတယ်။ အဲ မိဘ နှစ်ပါးလုံး ကွယ်လွန်သွားခဲ့ပြီ ဆိုရင်တော့ သမုဒ္ဒရာ ရောက်သွားသလို ဘာဆိုဘာမှ မချိုနိုင်တော့ပါဘူး။မိဘတွေ ရှိနေတုန်းစိမ့်ရေစမ်းရေလိုချိုကြပါ။မြစ်ရေ လို ချိုကြပါ။မိဘတွေမရှိတော့မှ၊ သမုဒ္ဒရာ ရောက် တော့မှ၊ ချိုလို့ မရတော့တာကို နောင်တမရမိကြပါစေနဲ့။မိဘကျေးဇူးဆိုတာ အချိန်တိုင်းနေရာတိုင်း မှာ အမြဲထာဝရ နှလုံးသွင်းရမယ့် တရားပါ။
ဥပဓိဆိုတဲ့ဥစ္စာ ရှိတယ်။ ရုပ်အဆင်းကို ခေါ်တယ်။ ရုပ်အဆင်းဟာ အမှတ်တမဲ့တော့ အရေးမကြီးပါဘူးလို့ ပြောတယ်။ ဒါပေမယ့် ရုပ်အဆင်းလှတယ်ဆိုရင်ပဲ ဘေးက မြင်နေရတဲ့သူက .. တယ် ရုပ်ကလေးက သနားကမားလေးနဲ့ ဆိုပြီးတော့ သူ့အပေါ် ချစ်ခင်စိတ် ရှိတယ်။ကလေး ကလေးဆိုလို့ရှိရင်လဲ ရုပ်ကလေးက သနားကမားကလေးနဲ့ ဆိုပြီးတော့ ကျွေးချင် မွေးချင်လာတယ်။လူကြီး လူကြီးအလိုက်ပေါ့လေ။အရုပ်က ဆိုးနေပြီဆိုလို့ရှိရင် ကျွေးချင် မွေးချင်စိတ်တောင် နည်းသွားတယ်။သနားတတ်တဲ့သူနဲ့ တွေ့ရင်သာ ကျွေးချင် မွေးချင်တယ်။ဒါကြောင့် ဥပဓိဆိုတဲ့ ရုပ်အဆင်းဟာ သိပ်အရေးကြီးတာပဲ။ဟို အထက်တန်းကျလေ ရုပ်အဆင်းက အရေးကြီးလေ။အထက်တန်းရောက်လာလေ ဥပဓိက အရေးကြီးလေ။သူတို့ကတော့ဖြင့် အကျိုးမပေးပဲ နေပါ့မလား .. ဥပဓိကိုက တယ်ကောင်းတာကိုး။အကုန်လုံး လိုက်ပြီးတော့ အကျိုးပေးစရာ အကြောင်းဖြစ်သွားတယ်။အရှင် ဇာနကာဘိဝံသ
စိတ်နေစိတ်ထား မကောင်းတဲ့သူဟာ အဆင်းလှတာ တော်တော် ကြောက်စရာ ကောင်းတယ်။ဒါက သူများ မဟုတ်ဘူး။ ဘုန်းကြီးတို့ ဘုရားရှင်ရဲ့ညီတော် အရှင်အာနန္ဒာအလောင်းပဲ။သူဟာ တဘဝမှာ သိပ်လှတဲ့ လူတယောက် ဖြစ်တယ်။ သိပ်လှတော့ သူ့ကို ဘေးက အမျိုးသမီးတွေက အလွန် အရေးပါကြတယ်။ အရေးပေးသည့်အားလျော်စွာ သူကလဲပဲ ပြန်ပြီးတော့ကို အင်း .. ဖောက်ဖောက်ပြန်ပြန်ကလေး ဖြစ်လိုက်ရော။အဲဒီလို ဖောက်ဖောက်ပြန်ပြန် ဖြစ်တာနဲ့ပဲ ငရဲကျပြီး တော်တော်ကြာတော့ နပုံးပဏ္ဍုက်ဖြစ်ရတယ်။ တိရစ္ဆာန်ဖြစ်ရတယ်။ တိရစ္ဆာန်မှာလဲပဲ အထီးမဟုတ် အမ,မဟုတ် ဖြစ်ရတယ်။ လူဖြစ်ပြန်တော့လဲပဲ ယောက်ျားမဟုတ် မိန်းမ,မဟုတ် ဖြစ်ရတယ်။ နောက် မိန်းမဘဝ ဖြစ်ရတယ်။ နောက် တော်တော်ကလေး ကြာတော့မှ ယောက်ျားဘဝ ဖြစ်ရတယ်။ ကြည့်စမ်း .. သူများမဟုတ်ဘူး။ အရှင်အာနန္ဒာအလောင်း။ ဒါ့ကြောင့် ကုသိုလ်ကံ အကျိုးပေးပေမယ်လို့ အလိမ္မာဆိုတာ အင်မတန် လိုတယ်။အဲဒီအခါတုန်းက သာသနာပဖြစ်လို့ နေမှာပေါ့။သာသနာတွင်းသာ ဖြစ်မယ်၊ သူတော်ကောင်းတွေနဲ့သာ ပေါင်းသင်းဆက်ဆံရမယ်ဆိုရင် အရှင်အာနန္ဒာအလောင်းတို့လို ပုဂ္ဂိုလ်မျိုးဟာ အကြောင်းမဲ့ မကောင်းတဲ့အလုပ်တွေ မလုပ်မိပါဘူး။အခုတော့ ကာလဒေသက မကောင်းတာနဲ့၊ မိကောင်းဖကောင်း ဆရာကောင်းသမားကောင်းတို့ရဲ့ အဆုံးအမတွေနဲ့ မတွေ့ရတာနဲ့ အရှင်အာနန္ဒာအလောင်းတောင် ရုပ်ချောတဲ့ဘဝမှာ မှားမှားယွင်းယွင်း ဖြစ်ရတယ်။ဒီတော့ ရုပ်အဆင်းလှတာဟာ အင်မတန် သတိထားစရာ ကောင်းတယ်။ဘုန်းကြီးတို့ မြို့ကြီးပြကြီးတွေမှာ အမျိုးသမီးတွေ ရုပ်အဆင်းလှတာနဲ့ ပျက်စီးကြတယ်။ တော်တော်များများ ပျက်စီးကြတယ်။ရုပ်အဆင်းလှတာနဲ့ပဲ ဒီ့အပြင် မတရားတဲ့အလုပ်တွေ လုပ်ကြတယ်။ ဒါကြောင့် ရုပ်အဆင်းလှမှု အမျိုးမြတ်မှုဟာ ကိုယ်က လိမ္မာပါမှ အထက်တန်းတိုးပြီးတော့ အကျိုးရတယ်။ရုပ်အဆင်းလှပေမယ်လို့ အမျိုးမြတ်ပေမယ်လို့ စိတ်ထားမတတ်လို့ရှိရင် ပြန်ပြီးတော့ အောက်တန်းကျဖို့ ဖြစ်တယ်။(အရှင်ဇာနကာဘိဝံသ)
မေတ္တာသည် သူတစ်ပါးအကျိုးစီးပွားကို လိုလားတတ်သောသဘောရှိ၏။ အများအကျိုးဆောင်တတ်၏၊ စိတ်ထဲ၌ ခိုးလိုးခုလု မကျေနပ်မှု မှန်သမျှကို ပြေပျောက် စေ၍ ကျေကျေနပ်နပ် ကြည်ကြည်ဖြူဖြူ ရှိစေ၏။
မေတ္တာဖြစ်ဖို့အတွက် အနီးကပ်ဆုံး အလိုအပ်ဆုံး အကြောင်းတရားကား သူတစ်ပါး၏ အကျိုးစီးပွားဖြစ်၏၊ မေတ္တာသည် သူတစ်ပါးအကျိုးစီးပွားကိုသာ အာရုံပြု၏၊ ကိုယ်ကျိုးစီးပွားကို အာရုံစိုက်လွန်းသူအဖို့ မေတ္တာမဖြစ်နိုင်၊ ကိုယ်ကျိုးစီးပွား အလေးထားသူသည် ကိုယ်ကျိုးကိုယ်စီးပွားကို လုံး ပမ်းရ၊ ကာကွယ်နှင့် အလုပ်ရှုပ်နေသဖြင့် သူ့ကျိုးသူ့စီးပွားအတွက် အချိန်မပေးနိုင်တော့။
မေတ္တာကို အချစ်ဟုမြန်မာမှုပြုကြ၏၊ အမှန်က မေတ္တာဟူသည် ကိုယ်ကျိုးမဖက် သူ့အကျိုးသက်သက်ကိုသာ လိုလားတတ်သော သဘောရှိ၏၊ သူကျိုး ကိုယ့်ကျိုး အပြန်အလှန် မျှော်ကိုးလျှင် မေတ္တာမဟုတ်၊ ကူးသန်းရောင်းဝယ်မှု ပြုလုပ်ခြင်း သည်သာဖြစ်၏၊ သူ့ဘက်က အခြေအနေကောင်းမှ မေတ္တာထားနိုင်ခြင်း၊ မေတ္တာတုံ့ပြန် နိုင်ခြင်းသည်လည်း အမှန်က မေတ္တာမဟုတ်၊ အရောင်း အ၀ယ်လုပ်ခြင်း သာဖြစ်၏။ မေတ္တာ၌ အယူမရှိ အယူမပါ ၊ အပေးသာရှိ၏။
စာရေးဆရာတို့သည် စာဖတ်သူကို ပေးချင်လို့သာ ရေးနေကြခြင်းဖြစ်၏၊ ၀ါသနာအရဟုလည်း ဆိုနိုင်၏၊ စာမူခကို မျှော်လင့်ြ ပီး ရေးေ နကြသည်မဟုတ်၊ ကိုယ်သိတာ၊ ကိုတတ်တာလေးတွေကို ပေးချင်လို့ ဝေချင်လို့ မျှချင်လို့ အတိုင်းအတာ တစ်ခု အထိ ကောင်း ကျိုးသက်ရောက်မှု ရှိစေချင်လို့ ရေးနေခြင်းသာ ဖြစ်၏၊
စိတ်မကုန်ခင် အထိတော့ ရေးနေကြဦးမည်သာ ဖြစ်၏။ တစ်ချို့ စိတ်ကုန်သော ဆရာ့ဆ၇ာကြီးတွေ ကတော့ မရေးတော့ ဘဲ ဘေးထွက် ထိုင်နေကြ၏၊ စာရေးဆရာ တစ်ယောက်အဖို့ စာရေးနေရသော အချိန်သည် စိတ်အကြည်လင်ဆုံအချိန်၊ စိတ်ချမ်းသာမှု အရှိဆုံး အချိန် ဖြစ်၏။
မေတ္တာဟူသည် အစိုဓာတ်ဖြစ်၏၊ အစေးဓာတ်ရှိ၏၊ အအေးဓာတ်ရှိ၏၊ ယင်းအစိုဓာတ်၊ အစေးဓာတ်၊ အအေးဓာတ်ဖြင့် သက်ရှိသတ္တ၀ါ တစ်ဦးဦးအပေါ် မြှေးယှက်လွှမ်းခြုံထားမှုကို မေတ္တာဟု ခေါ်၏။ မေတ္တာက စူပါဂလူးကဲ့သို့ ကပ်အား အလွန်ကောင်း၏၊ မည်သူနှင့်မည်ဝှာတော့ အစေးမကပ်ကြ အစေးမကူးကြဟု ပြော ကြ၏၊ မေတ္တာပျက်နေခြင်းကြောင့်ဖြစ်၏၊ တစ်ဦးအပေါ် တစ်ဦး မေတ္တာ မထားနိုင်ကြ သဖြင့် အစေးမကပ်၊ အစေးမကူးခြင်းသာ ဖြစ်သည်။
မိသားစုဝင်တွေ စည်းစည်းလုံးလုံး ရှိရ၏၊ ညီအစ်ကိုမောင်နှမတွေ စည်းစည်း လုံးလုံးရှိရ၏၊ ရပ်ရွာ၊ မြို့နယ်၊ တိုင်းပြည် စသည့် လူ့အဖွဲ့အစည်းအားလုံး စည်းစည်း လုံးလုံး ရှိရ၏၊ စည်းစည်းလုံးလုံး ရှိဖို့ မေတ္တာအစိုဓာတ်၊ မေတ္တာအစေးဓာတ် အဓိက လိုအပ်ပါသည်။ စည်းလုံးဟူသည် ပါးစပ်နှင့် စည်းလုံး၍မရ၊ မေတ္တာနှင့်သာ စည်းလုံး၍ ရနိုင်သည်။
စည်းလုံးဖို့အတွက် ချစ်ကြည်မှုလိုသည်၊ ချစ်ကြည်မှုအတွက် ညီညွတ်မှုလိုသည်၊ ညီညွတ်ဖို့အတွက် မျှတဖို့လိုသည်၊ မျှတမှ ညီညွတ်မည်၊ ညီညွတ်မှ ချစ်ကြည်မည်၊ ချစ်ကြည်မှ စည်းလုံးမည်၊ မိဘနှင့်သားသမီး၊ လူကြီးနှင့် လူငယ်အားလုံး မျှမျှတတ အသက်ရှင်သန်ကြဖို့ အရေးတကြီးလိုအပ်ကြောင်း “သမဇိဝိတသမ္ပဒါ”ဟု ဘုရားမိန့် တော်မူခဲ့သည်။
မေတ္တာသည် အလိုအပ်ဆုံးဖြစ်သောကြောင့် မေတ္တာသည် အလွယ်ကူဆုံးဖြစ် သောကြောင့် ဗြဟ္မစိုရ်တရားလေးပါး တွင် မေတ္တာ ကို ရှေ့ဆုံးမှ ထား၍ ဟောခဲ့သည်၊ ပြဿနာအထွေထွေတို့သည် ယင်းမေတ္တာ မထားနိုင်ကြခြင်းကြောင့်ဖြစ်၏၊ ရှေးလူကြီး သူမတို့ ကတော့ ကောင်းကွက်ကိုရှာ မေတ္တာဟု ဆိုမိန့်ခဲ့ကြသည်။
လောက၌ အကောင်းဆုံးပါ ဟူသော လူပုဂ္ဂိုလ်ရှားသလို အဆိုးဆုံးပါဟူသော လူပုဂ္ဂိုလ်လည်း ရှိမည်မဟုတ်ပေ၊ လူကောင်း အမည်ခံပုဂ္ဂိုလ်တွေမှာ အားနည်းချက် ၊ ပျော့ကွက်၊ ဟာကွက်၊ ညံ့ကွက်၊ ဆိုးကွက် ရှိနိုင်သလို၊ လူဆိုးဟု သတ်မှတ်ခံရသော ပုဂ္ဂိုလ်မှာလည်း တစ်ကွက်ကောင်းတော့ ရှိတတ်ပါသည်။ မေတ္တာဟူသည် ကောင်းကွက် ကို ရှာဖွေ၍၊ ရှာကြံ၍၊ ရှုမြင်၍၊ ကျေနပ် ၍ ပျော့ကွက်၊ ဟာကွက်၊ ညံ့ကွက်၊ ဆိုးကွက်တို့ ကို ဥပေက္ခာပြုလိုက်ခြင်းပင် ဖြစ်သည်။
ကမ္ဘားအေး ဂန္ဓာရုံ တိပိဋကဆရာတော် သက်ရှိထင်ရှားရှိစဉ် ခရီးဝေးမှ ပြန်လာကာစတုန်းက မှတ်မှတ်ရရ အမိန့်ရှိခဲ့ဖူးသည်၊ ၀က်လက် မစိုးရိမ်ဆရာတော် ဦးတိဿ ရေးသော လင်္ကာကို ရွတ်ပြပြီး ရှင်းပြသည်၊ လင်္ကာလေးက “ ချင်းချင်းဆက်ဆံ သည်း ညည်းခံ အမှန်လိုအပ်သည်၊ ကျေးဇူးမကင်း ပြစ်မကင်း ချင်းချင်းရှိတတ်သည်၊ ကျေးဇူးမျှော်မြင် ပြစ်မတင် ကြည်လင်ချမ်းမြေ့သည်၊ ချမ်းသာလိုရာ များသူငါ မေတ္တာခန္တီ ရှိရမည်”ဟူ၍ ဖြစ်သည်။
မိသားစုအချင်းချင်း၊ မောင်နှမအချင်းချင်း၊ ညီအစ်ကိုအချင်းချင်း၊ ဆွေမျိုးအချင်း ချင်း၊ လိုဖော်ကိုင်ဖက်အချင်းချင်း၊ ကိုယ့်လူမျိုး အချင်းချင်း၊ အနေအထားအမျိုမျိုး၊ အယူ အဆအမျိုးမျိုးနှင့် ပြောဆိုလုပ်ကိုင် ဆက်ဆံကြရာတွင် တစ်ဘောတည်း ဖြစ်ဖို့ရာ မလွယ်ကူ၊ စိတ်တွေ၊ ဆန္ဒတွေ၊ အယူအဆတွေ၊ ယုံကြည်ချက်တွေ တူညီဖို့ဆိုတာ မဖြစ်နိုင်၊ ထိုအခါ ၀ိရောဓိတွေ၊ ပဋိပက္ခတွေ ရှိလာလိမ့်မည်၊ ၀ိရောဓိတို့၊ ပဋိပက္ခတို့ ဆိုတာ ဖြစ်ရိုးဖြစ်စဉ်ဟုသာ နှလုံးသွင်းရမည်၊ ရေးကြီးခွင်ကျယ် အလုပ်ကြီးတစ်ခု သဖွယ် အချိန်ပေး၊ အချိန်ဖြုန်းနေဖို့ မဟုတ်။
အချင်းချင်းတွေကြားမှာ လိုအပ်တာက စိတ်ရှည်၊ ဇွဲသန်၊ သည်းညည်းခံလို့ ဆိုသည့်အတိုင်း စ်ိတ်ရှည်ကြဖို့၊ စိတ်ရှည်ရာမှာလည်း ဇွဲရှိရှိနှင့် စိတ်ရှည်ကြဖို့၊ အချင်းချင်း သည်းညည်းခံကြဖို့ အလွန်ပင် လိုအပ်လှပါသည်၊ တစ်ဦးနှင့်တစ်ဦး အချင်းချင်း ကျေးဇူးလည်း မကင်းကြ၊ အပြစ်လည်းမကင်းကြ၊ သူ့ကျေးဇူး၊ ကိုယ့်ကျေးဇူး၊ သူ့အပြစ်၊ ကိုယ့်အပြစ်၊ အချင်းချင်းအပေါ်မှာ အပြန်အလှန်ရှိကြသည်။
စိတ်ရှည်စွာ၊ သည်းခံစွာ၊ နားလည်မှုရှိစွာ၊ သဘောထားကြီးစွာ၊ အမြှော်အမြင် ကြီးစွာဖြင့် သူ့ကျေးဇူးတွေကို ဆင်ခြင်ပွားများ လျက် ဖြစ်ပေါ်လာတတ်သော သူ့အပြစ် တွေကို သူ့ကျေးဇူးတွေနှင့် အစားထိုး ဖုံးကွယ်ချေဖျက်၍ သည်းခံနိုင်ကြ၊ ခွင့်လွှတ်နိုင် ကြလျှင် လောကကြီးက နေသာထိုင်သာ၊ နေပျော်ထိုင်ပျော် ရှိပါလိမ့်မည်၊ ကြည်ကြည်သာသာ၊ ချမ်းချမ်းမြေ့မြေ့ ရှိပါလိမ့်မည်၊ မိမိတို့ ချမ်းချမ်းသာသာ နေချင် သပဆိုလျှင်တော့ မေတ္တာခန္တီရှိမှသာ ဖြစ်မည်။
ကိလေသာခေါင်းပါးစေတတ်သော အကျင့်ကို “ ဓုတင်အကျင့်”ဟု ခေါ်၏၊ ဓုတင် အကျင့် တစ်ဆယ့်သုံးပါး ရှိ၏။ ထိုအထဲတွင် ‘ပံသုကူလဓုတင်’ ဟု ရှိသည်၊ ပံသုက မြေမှုန့်၊ ကုလက လိမ်းကျံနေခြင်း၊ ပေကျံနေခြင်းဟု အဓိပ္ပါယ်ထွက်သည်၊ ပံသုကူလ ဓုတင်ဆောင်သော ရဟန်းသည် သုသာန်တစ်စ သင်္ချိုင်းဝ၊ လမ်းဆုံလမ်းမ လမ်းလေးခွ တို့မှ တွေ့ရာ အ၀တ်စုတ်တွေကို ကောက်ယူပြီး မကောင်းသော အပိုင်းအစ လေးတွေ ကို ခြေထောက်တစ်ဖက်နှင့် ဖိနင်းဖဲ့ဆုတ်ပစ်၊ ကောင်းသော အပိုင်းအစလေး တွေကို ဖြတ်တောက်ယူ၊ တစ်ထွာတစ်မိုက်ရှိ ထိုအစလေးတွေကို စပ်ချုပ်၊ ဆေးဆိုးပြီး ၀တ်ရုံ ရသည်၊ ပံသုကူဓူ တင်ဆောင် မထေရ်သည် အ၀တ်စုတ်တွေမှ မကောင်းတာလေး တွေပယ်ပြီး၊ ကောင်းတာလေးတွေ ဖြတ်တောက်ယူသကဲ့သို့ အချင်းချင်း ပေါင်းသင်း ဆက်ဆံသည့်နေရာမှာလည်း မကောင်းကွက်တွေကို ဖယ်ထားပြီး ကောင်း ကွက်လေး တွေကြည့် ကာ ပေါင်းသင်းရမည်ဟု စာကဆိုသည်။
သန္တုဋ္ဌီပရမံ ဓနံ- တင်းတိမ်ရောင့်ရဲခြင်းသည် အမြတ်ဆုံးဥစ္စာဟု ဘုရားဟော သည်၊ ဥစ္စာဟူသည် ချမ်းသာဖို့ဖြစ်သည်၊ ရွှေရှိလျှင် ချမ်းသာသည်၊ ငွေရှိလျှင် ချမ်းသာ သည်၊ အခြားစည်းစိမ်ဥစ္စာရှိလျှင်လည်း ချမ်းသာသည်၊သို့ရာတွင် ထိုလောကီရွှေငွေ စည်းစိမ်ဥစ္စာတို့က ပေးသော ချမ်းသာကား ပူစပ်ပူလောင် ချမ်းသာမျိုး ဖြစ်သည်၊ တကယ့် ငြိမ်းငြိမ်းအေးအေးနှင့် ချမ်းသာသော ချမ်းသာကတော့ တင်းတိမ် ရောင့်ရဲနိုင်မှု ဖြစ်သည်။
ပညာတွေ၊ ဥစ္စာတွေ ရှာရမည်၊ ရသင့်သလောက်၊ ရနိုင်သလောက်၊ ကြိုးကြိုးစား စားရှာရမည်၊ သို့သော် လောဘတွေ အလွန့်အလွန်ကြီးစွာ မတော်မတရား ၀ိသမ လောဘတွေနှင့် မရှာနှင့်၊ ရိုးရိုးသားသား ကြိုးကြိုးစားစားနှင့်ရှာပြီး ရတာနှင့်၊ ရှိတာနှင့် ကျေနပ်ရမည်၊ တင်းတိမ်ရမည်၊ ရောင့်ရဲရမည်၊ သန္တုဋ္ဌီဟူသည် ထိုအဓိပ္ပါယ် ဖြစ်သည်။
ပေါင်းသင်းဆက်ဆံကြသည့် နေရာမှာလည်း ကိုယ့်အလိုကျတော့ ဖြစ်မည် မဟုတ်၊ ကိုယ့်စိတ်တိုင်းကျတော့ ဖြစ်မည်မဟုတ်၊ မတူတာတွေခွဲ၊ တူတာတွေတွဲပြီး အလုပ်လုပ်လို့ အလုပ်ဖြစ်လျှင် ကျေနပ်ရတော့မည်၊ သို့ဆိုလျှင် အဆင်ပြေပါသည်၊ ထိုကောင်းကွက်လေးတွေကို ရှာကြံ ရွေးချယ်ပြီး ကျေနပ်စွာလက်ခံ၍ အလုပ်လုပ်လျှင် အလုပ်ဖြစ်ပါလိမ့် မည်၊ မေတ္တာဟူ သည် ကောင်းကွက် ကို ရှာဖွေတွေ့ရှိ ကျေနပ်စွာဖြင့် နေတတ်လာခြင်းပင် ဖြစ်သည်။
လောကီရတနာတွေနဲ့ လွဲရတယ်ဆိုရင် တစ်ဘ၀၊ တစ်ခန္ဓာပဲ နစ်နာတတ်တာပါ။
လာကုတ္တရာ ရတနာတွေနဲ့ လွဲသွားလို့ကတော့ သံသရာနဲ့ချီမြီး ဆုံးရှုံးနစ်နာကြမှာပါ။
လောကရဲ့ အမွန်အမြတ်ကို"ရတနာ"လို့ ခေါ်ဆိုပါတယ်။ ရတနာဆိုတာ ပါဠိ စကားပါ။ သူ့ရဲ့ ပင်ရင်းအနက်က " တွေ့ရမြင်ရ ပိုင်ဆိုင်ခွင့်ရသူကို ကြည်လင်ရွှင်ပျ နှစ်သက်အားရ ကျေနပ်မှုကိုဖြစ်စေ ရစေတတ်သောအရာ"လို့ အဓိပ္ပါယ်ရပါတယ်။
ရတနာဆိုတာ ထိုက်တန်မှ"ရ" ၊ မြတ်နိုးစွာပိုက်ထွေးမှ "မြ" တတ်တာမျိုးပါ။ သူနဲ့ မထိုင်တန်ရင် "လွဲ"တတ်သလို သူ့ကို မြတ်နိုးစွာ မပိုက်ထွေးရင်လည်း "ခွဲ"သွားတတ်ပါတယ်။
ဒါကြောင့် ရတနာနဲ့ ပတ်သက်၇င် သူ့ရဲ့သဘာဝကို သိပြီး သူ့ကို မြတ်နိုးတန်ဖိုး ထားတတ်ဖို့ဆိုတာ အလွန်အရေးကြီးပါတယ်။ ရတနာတွေရဲ့ သဘာဝကို…
(၁) အလေးအမြတ်ပြုအပ် မြတ်နိုးထိုက်တာကြောင့်ရယ်၊
(၃) အတုမဲ့ ဖြစ်တာကြောင့်ရယ်၊
(၄) တွေ့ရမြင်ရ ပိုင်ဆိုင်ခွင့်ရဖို့ ခဲယဉ်းတာကြောင့်ရယ်၊
` (၅) အထက်တန်းကျ မြင့်မြတ်သူတွေရဲ့ အသုံးအဆောင်ဖြစ်တာကြောင့်ရယ်၊
ဒီအကြောင်းငါးမျိုးကြောင့်သာ အမွန်အမြတ်=ရတနာလို့ ခေါ်ဆိုသတ်မှတ်နိုင်ပါကြောင်းကို ပါဠိစာပေမှာ အနက်အဓိပ္ပါယ်အကျယ် ဖွင့်ဆိုရှင်းပြထားပါတယ်။
ဒီအချက်အလက်တွေကို အသေးစိတ် စဉ်းစားသုံးသပ်ကြည့်မယ်ဆိုရင် ရတနာတွေနဲ့ ထိုက်တန်တဲ့ အဖိုးတန် နှလုံးသားတစ်ခု ဖြစ်ဖို့ဆိုတာ မလွယ်ကူပါဘူး။ မိမိတို့ သန္တာန်မှာ ရတနာနဲ့ ထိုက်တန်တဲ့ ကံ၊ ရတနာရဲ့ တန်ဖိုးမှန်ကို သိနိုင်တဲ့ ဉာဏ် ၊ ရတနာရဲ့ တန်ခိုးအရှိန်အ၀ါကို ထိန်းသိမ်းစောင့်ရှောက်ထားနိုင်တဲံ ၀ီရိယ၊ သုံးပါးစလုံး ပြည့်စုံနိုင်ပါမှ "ခြင်္သေ့ဆီဟာ သိင်္ဂီရွှေခွက်ထဲမှာသာ တည်နိုင်တယ်" ဆိုတဲ့ စကားဥပမာ လို အမွန်အမြတ်ရတာဟာလည်း ကိုယ့်နှလုံးသားမှာအစဉ်အမြဲ ကိန်းဝပ် စံပယ် တင့်တယ်နိုင်မှာပါ။
လောကမှာ အဖိုးတန် ရတနာ(၂)ပါးရှိပါတယ်။ လောကီရတနာနဲ့ လောကုတ္တရာရတနာပါ။ လူများစုဟာ စိန်၊ ရွှေ၊ငွေစတဲ့ လောကီရတနာတွေကိုသာ ရတနာအဖြစ်နဲ့ သုံးဆောင်တတ်ကြပြီး ဘုရား၊တရား၊သံဃာ လောကုတ္တရာရတနာတွေကိုတော့ အဖိုးတန် ရတနာအနေနဲ့ မသုံးဆောင်တတ်ကြပါဘူး။ ဒီအကြောင်းကို ဆရာသမားတွေက ပုံဥပမာလေးနဲ့ တင်စားပြီး ပြောပြတတ်ပါတယ်။
တစ်ခါတုန်းက ကြက်မကြီးတစ်ကောင်ဟာ အမှိုက်ပုံတစ်ခုမှာ အစာရှာနေပါ တယ်။ အမှိုက်ပုံထဲမှာ စားစရာ ပိုးကောင်၊ မွှားကောင်း ကလေးတွေ ထွက်ပေါ် လာအောင် ခြေထောက်နှစ်ဖက်နှင့် ယက်ပြီးတော့ ရှာနေတာပါ။ အမှိုက်တွေကို ယက်ယင်း၊ ယက်ယင်းနဲ့ အမှိုက်ပုံထဲက နီနီရဲရဲ ပတ္တမြားခဲကြီးတစ်ခု ပေါ်လာပါတယ်။ ဒီအခါ ကြက်မကြီးက ရတနာကို ရတနာမှန် မသိနိုင်တော့ စားစရာမဟုတ်တဲ့ ဒီပတ္တမြားခဲကြီးကို "တယ်ရှုတ်တဲ့ ကျောက်ခဲကြီးပဲ"ဆိုပြီး နံဘေးကို ယက်ထုတ်ပစ် လိုက်ပါတယ်။ ဒီလို ဘေးထုတ်ခံရလို့ ပတ္တမြားခဲကြီးက တန်ဖိုးလျော့သွားမှာ မဟုတ် ပါဘူး။ တန်ဖိုးမှန် မသိတဲ့ ကြက်မကြီးမှာသာ နစ်နာစရာရှိပါတယ်။ ဒီလိုနဲ့ တန်ဖိုးသိတဲ့ လူတစ်ယောက်က အမှိုက်ပုံနံဘေးရောက်လို့ ပတ္တမြားခဲကြီးကို ကောက်ယူသွားပြီး အသုံးချလိုက်တဲ့အခါ တကယ့်သူဌေးကြီးတစ်ဦး ဖြစ်သွားပါတယ်။
အဲဒီ ပုံပမာလိုပဲ၊ ယခုခေတ် လူသားတွေဟာလည်း စား နေ ၀တ်ကိစ္စအတွက် လောကလူဘုံ အမှိုက်ပုံကြီးထဲမျာ လုယက်ပြီးတော့ စီးပွားရှာနေကြရတာပါ။ အဲဒီလို အလုအယက် စီးပွားရှာဖွေရင်းက (သာသနာတော်ထွန်းလင်းတဲ့ ခေတ်အတွင်းမှာ လူလာဖြစ်တော့ ကံကောင်းထောက်မစွာနဲ့ ) ဘုရား၊ တရား၊ သံဃာ ရတနာ(၃)ပါး တို့ကို တွေ့ကြုံကြရပါတယ်။ ဒီလို တွေ့ကြုံဆုံခွင့် ရကြပေမယ့် မိမိကိုယ်ကိုမိမိ မဟာကံ ထူးရှင်တွေအဖြစ် မမြင်နြုိင်ကြတဲ့ သူတွေက ရတနာကို ရတနာမှန်း မသိနိုင်တော့ "တယ်ရှုတ်တဲ့ ကျော်ကခဲတွေပါ၊ ဒီမှာ မအားသေးဘူး" ဆိုပြီး ဘ၀ထဲကနေ ဘေးကန် ချထားတတ်ကြပါတယ်။
အဲဒီအတွက် ရတာနာသုံးပါးမှာ ဘာမျှမဖြစ်သွားပေမယ့် အဖိုးတန်အခွင့် အရေးနဲ့ လွဲသွားခဲ့ရတဲ့လူတွေရဲ့ ဆုံးရှုံးနစ်နာမှုအတွက်တော့ကိုတော့ အင်မတန်ကြေကွဲ ၀မ်းနဲဖို့ ကောင်းပါတယ်။ ဒီအကြောင်းနဲ့ ဆက်စပ်တဲ့ ဓမ္မပုံပြင်ကလေးတစ်ပုဒ်ကို ပြောပြချင် တယ်။
ဟိုးရှေးရှေးတုန်းက ရွာကြီးတစ်ရွာမှာ ဓမ္မာနန္ဒနဲ့ ဓနာနန္ဒတို့အမည်ရတဲ့ သူငယ်ချင်းနှစ်ဦးရှိခဲ့ဖူးတယ်။ သူတို့နှစ်ဦးဟာ ငယ်သူငယ်ချင်းတွေပီပီ တစ်ဦးအပေါ် တစ်ဦး အင်မတန်မှ ချစ်ခင်ကြင်နာကြတယ်။ သူငယ်ချင်းနှစ်ဦးဟာ ပုဂ္ဂိုလ်ရေး ခင်မင်မှု အရ နှစ်ဦးသား မကွဲမပြား တစ်သားတည်း ဖြစ်ကြပေမယ့် စိတ်ဓာတ်ရေးရာတော့ ကွဲပြားခြားနာနေကြတယ်။ ဓမ္မာနန္ဒက ရင့်ကျင်မှုအားကောင်းပြီး တရားဓမ္မကို ရှာဖွေလိုတယ်။ ဓနာနန္ဒကတော့ အပျော်အပါးမက်မောပြီး ဥစ္စာဓနကို ရှာဖွေလိုတယ် တဲ့။
ဒီလိုနဲ့ သူတို့သူငယ်ချင်း နှစ်ဦးဟာ အရွယ်ရောက်လာတော့ ဓမ္မာနန္ဒက တရား ရှာမယ်ဆိုပြီး သင်္ကန်းဝတ်နဲ့ တောထွက်သါားတယ်။ ဓနာနန္ဒကလည်း စီးပွားရှာမယ် ဆိုပြီး ကုန်သည်တစ်စုနဲ့ မြို့တက်သွားတယ်။ လောကရဲ့သဘ၀ကလည်း ရှာဖွေတာ ကိုပဲ ရတတ်စမြဲပါ ဒါကြောင့် တရားရှာတဲ့ ဓမ္မာန္ဒဟာ တောထဲမှာ ရဟန္တာအရှင်မြတ် တစ်ပါးနဲ့ တွေ့ပြီး တရားတော်ကို သဘောပေါက်ကာ တစ်ပါးတည်း တောရဆောက် တည်နေတော့တယ်။ (၃-၄)နှစ်လောက်ကြာမှ မြိ့ကို တစ်ခေါက်တစ်ခါပဲ ရောက်တတ် သတဲ့။ ရောက်တော့လည်း အချိန်အကြာကြီး နေလေ့မရှိဘဲ တစ်ရက်လောက် နေပြီး လို့ ကိစ္စပြီးတာနဲ့ တောကိုပဲ ပြန်ကြွလေ့ရှိတယ်။
စီးပွားရှာသွားတဲ့ ဓနာနန္ဒကလည်း မြိုံတော်က သူဌေးကြီးတစ်ဦးထံမှာ တပည့်ခံ ပြီး ကြိုးစား စီးပွားရှာလိုက်တာ(၃-၄)နှစ်နဲ့ သူလည်း သူဌေးကြီးတစ်ဦးဖြစ်လာသတဲ့။ ဒီလိုနဲ့ မြို့ပေါ်က သူငယ်ချင်းနဲ့ တောထဲက သူငယ်ချင်းနှစ်ဦးဟာ တစ်ဦးနဲ့တစ်ဦး ဆုံတွေ့ခွင့်မရဘဲ နေလာလိုက်ကြတာ နှစ်ပေါင်း(၂၀)လောက်ကြာမှာ မထင်မှတ်ဘဲ သူတို့နှစ်ဦးဟာာ ပြန်လည်ဆုံတွေ့ကြသတဲ့။ အဲဒီအချိန်မှာ နှစ်ဦးစလုံးဟာ အသက်(၅၀) ကျော်နေကြပြီပေါ့။
အဲဒါနဲ့ သူဌေးကြီး ဓနာနန္ဒဟာ ငယ်သူငယ်ချင်း ဆရာတော် ဓမ္မာနန္ဒကို ၀မ်းမြောက်ဝမ်းသာ နှုတ်ဆက်ကန်တော့ပြီး နေအိမ်ကို ပင့်ဆောင်ခဲ့ပါတယ်။ သူဌေးကြီး နေအိမ်မှာ တစ်ညကျိန်းစက်စေပြီး နေအိမ်မှာ သီတင်းသုံးနေစဉ်အတွင်း ဆရာတော် ဓမ္မာနန္ဒကို ပစ္စည်းလေးပါးနဲ့ လိုသေသေးမရှိ ပြုစုလှူဒါန်းပါတယ်။ ဆရာတော် ဓမ္မာနန္ဒ ကလည်း သူဌေးကြီး ဓနာနန္ဒကို အနုမောဒနာ ပြုတဲ့အနေနဲ့ တရားတစ်ပုဒ်ဟောကြားချီး မြှင့်ခဲ့ပါတယ်။
တရားစောကြားလို့ ပြီးတဲ့အခါ နှုတ်ဆက်စကားပြောတဲ့အနေနဲ့ "ဒါယကာ သူဌေး ကြီး [B][I]လောကမှာ တာဝန်သိသူဟာ တာဝန်ရှိတယ်။ တန်ဖိုးသိသူဟာ တန်ဖိုးရှိတယ်။ တရားသိသူသဟာ တရားရှိတယ[/I][/B]်။ ဒီစကား(၃)ခွန်းကို မမေ့မလျော့ အမြဲတမ်းနှလုံးသွင်း ပြီး ကျင့်ကြံအားထုတ်ပါလေ"လို့ မှာကြားပြီး တောထဲကို ပြန်ကြွသွားပါတယ်။
ဆရာတော် ဓမ္မာနန္ဒ ပြန်ကြွသွားတဲ့အခါ သူဌေးကြီး ဓနာနန္ဒဟာ စဉ်းစားခန်း ၀င်ပြီး ကျန်ရစ်ပါတယ်။ ဆရာတော် မှာကြားထားတဲ့ စကား(၃)ခွန်းမှာ ပထမစကား တစ်ခွန်းဖြစ်တဲ့ "တာဝန်သိသူဟာ တာဝန်ရှိတယ်"ဆိုတဲ့ စကားကတော့ လောကီစကား မို့ သူနားလည်တယ်။ တာဝန်ဝတ္တရားကို သိနားလည်သူဟာ(တာဝန်မဲ့ မနေလိုသော ကြောင့် ) ရောက်ထာတဲ့ တာဝန်ကို ကျေပွန်အောင် ထမ်းဆောင်တတ်တာမို့ တာဝန် ရှိနေတယ်ဆိုတာ သူသဘောပေါက်ပါတယ်။
ဒါပေမယ့်" တန်ဖိုးသိသူဟာ တန်ဖိုရှိတယ်"ဆိုတဲ့ ဒုတိယစကားကို သူဝေ့လည် လည် ဖြစ်နေတယ်။ ဒါနဲ့ ဒီစကားနားလည်အောင် သူလက်တွေ့စမ်းသပ်မှုတစ်ခု ပြုလပ်မယ်လို့ ဆုံးဖြတ်လိုက်ပါတယ်။ သူဌေးကြီးဓနာနန္ဒဟာ မီးခံသေတ္တာထဲက သူပိုင် တဲ့ အဖိုးတန် စိန် ရတနာတစ်ပွင့်ကို ထုတ်ယူလိုက်ပါတယ်။ နောက်ပြီး သူ့လူယုံ တပည့် ကိုလည်း ခေါ်လိုက်ပါတယ်။
လူယုံတပည့် ရောက်လာတဲ့အခါ သူဌေးကြီးက "ကဲ.. မောင်ရင်၊ ဟောဒီ စိန် တစ်ပွင့်ကို ယူသွားပြီးရင် ဈေးထဲမှာ တွေ့တဲ့သူကို ရောင်းကြည့်စမ်း၊ ရောင်းတဲ့အခါ သူပေးနိုင်တဲ့ တန်ဖိုးထက် နည်းနည်းပိုပြီးတော့ တောင်းပါ။ ပြီးရင် ငါ့ထံလာပြီး အကြောင်းပြန်ပြောပါ"လို့ မှာကြားပြီး ဈေးထဲကို လွှတ်လိုက်ပါတယ်။
သူဌေးကြီးရဲ့ လူယုံတပည့်ဟာ ဈေးထဲရောက်သွားတဲ့အခါ အဦးဆုံး ဖရဲသီး ရောင်း နေသူတစ်ဦးကို တွေ့ပါတယ်။ အဲဒါနဲ့ သူ့ထံသွားပြီး စိန်ပွင့်ကိုပြကာ ၀ယ်ယူ မယ်ဆိုရင် ရောင်းလိုကြောင်း ပြောပြပါတယ်။ ဒီအခါ ဖရဲသီးသည်က ယခု လောလော ဆယ်ဝယ်ဖို့ သူ့မှာ ငွေမရှိသေးကြောင်း၊ တကယ်လို့ ဖရဲသီးနဲ့ လဲလှယ် ရမယ်ဆိုရင် ဖရဲသီး(၉)လုံးအထိ ပေးနိုင်ကြောင်း ပြောပါတယ် သူဌေးကြီးရဲ့ လူယုံကလည်း "ကဲ.. ဒါဆိုရင် နောက်ထပ် တစ်လုံးတိုးပြီး ဖရဲသီး (၁၀)လုံးပေးရင် ရောင်းမယ်လို့ ထပ်ပြော ပါတယ်။ အဲဒီအခါ ဖရဲသီးသည်က "ဘာမဟုတ်တဲ့ ဒီကျောက်သေးသေးလေးကို ဖရဲသီး(၉)လုံးပဲပေးနိုင်တယ်။ ရောင်းချင်ရောင်း မရောင်းချင်နေ၊ ဖရဲသီး (၁၀)လုံးတော့ မပေးနိုင်ပဘူးလို့ ပြောပြီး ငြင်းဆိုလိုက်ပါတယ်။
သူဌေးကြီးရဲ့တပည့်လည်း သူ့အရှင်သခင် သူဌေးကြီးထံပြန်လာပြီး ဖရဲသီးသည်နဲ့ ပြောဆိုခဲ့သမျှ ဖြစ်ကြောင်းကုန်စင် အကုန်တင်ပြပါတယ်။ သူဌေးကြီးက ဘာမျှပြန်မ ပြောဘဲ ပြုံးပြုံးကြီးလုပ်ကာ နောက်တစ်ဦးဦးထံ သွားရောင်းဖို့ ဈေးထဲကို နောက်ထပ် စေလွှတ်ပြန်ပါတယ်။
ဒီတစ်ခါတော့ သူဌေးကြီးရဲ့ လူယုံတပည့်ဟာ အ၀တ်အထည်တွေ ရောင်းနေသူ တစ်ဦးထံ ချဉ်းကပ်ပြီး စိန်တစ်ပွင့်ရောင်းလိုကြောင်း ပြောပြပါတယ်။ အထည်သည်က လည်း လောလောဆယ် သူ့မှာ ငွေမရှိသေးကြောင်းနဲ့ အထည်နဲ့ လှဲလှယ်ရမယ်ဆိုရင် အင်္ကျီ(၉)ထည် ပေးနိုင်ကြောင်း ပြောပါတယ်။ သူဌေးကြီးကြီးရဲ့ တပည့်ကလည်း "ကဲ.. ကဲ.. ဒါဆိုရင် နောက်ထပ် အင်္ကျီတစ်ထည်တိုးပြီး အင်္ကျီ(၁၀)ထည်ပေးပါး။ ရောင်း ပါမယ်"လို့ ထပ်ပြောပါတယ်။ အဲဒီအခါ အထည်သည်က "စိတ်မ၀တ်ရလို့ ဘာမျှမဖြစ် ဘူး၊ ဒီအင်္ကျီတွေက တန်ဖိုးကြီးအထည်တွေ၊ ရောင်းချင်ရင်ရောင်း၊ မရောင်းနိုင်ရင်နေ၊ အင်္ကျီကိုတော့ (၁၀)ထည် မပေးနိုင်ပါဘူး"လို့ ပြောပြီး ငြင်းဆိုလိုက်ပြန်ပါတယ်။
သူဌေးကြီးရဲ့ လူယုံတပည့်လည်း ပိုင်ရှင်ဖြစ်တဲ့ သူဌေးကြီးထံ ပြန်လာပြီး အထည် သည်နဲ့ ပြောဆိုခဲ့ရသမျှကို ပြန်လည်တင်ပြပါတယ်။ဒီတစ်ခေါက်လည်း သူဌေးကြီးက ဘမျှ မပြောဆိုဘဲ ရယ်ကျဲကျဲလုပ်ကာ နောက်တစ်ဦးထံ သွားရောင်းဖို့ ဈေးထဲကို ထပ်မံ စေလွှတ်လိုကပါတယ်။
ဒီတစ်ခေါက်တော့ သူဌေးကြီးရဲ့ တပည့်ဟာ ရတနာကုန်သည်တစ်ဦးထံ သွားပြီး ရောင်းပါတယ်။ ရတနာကုန်သည်က စိန်ပွင့်ကို ယူပြီး ကြည့်လိုက်တဲ့အခါ အဖိုးမဖြတ် နိုင်အောင် တန်ဖိုးကြီးတဲ့ စိန်ဖြစ်နေတာကို တွေ့ရပါတယ်ယ။ ဒါကြောင့် သူက သူဌေးကြီး တပည့်ကို "မောင်ရင် ဒီစိန်ဟာ တန်ဖိုးမဖြတ်နိုင်အောင် အဖိုးတန်တဲ့ ရတနာပါ။ ဒီစိန်ရဲ့ တန်ဖိုးနဲ့ ညီမျှတဲ့ ဥစ္စာဓန အကျွန်ုပ်ထံမှာ မရှိပါဘူး။ မောင်ရင် ရောင်းလိုတယ်ဆိုပါက အကျွနိုပ်ပိုင်ဆိုင်သမျှ အားလုံးပေးအပ်ပြီး ၀ယ်ယူလိုပါတယ်"လို့ ပြောပါတယ်။
အဲဒါနဲ့ လူယုံတပည့်ဟာ သူဌေးကြီးထံ ပြန်လာပြီး ရတနာကုန်သည် မှာကြား လိုက်တဲ့အတိုင်း ပြောပြပါတယ်။ အဲဒီတော့မှ သူဌေးကြီးကသူ့တပည့်ကို "မောင်ရင် ငါဟာ ဒီ စိန်ကို တကယ်ရောင်းချင်လို့ ခိုင်းတာ မဟုတ်ပါဘူးကွာ၊ ဒီစိန်ရဲ့ တန်ဖိုးကို နဂိုကတည်းက ငါသိပြီးသားပါ။ ဒါပေမယ့် လူတွေဟာ တန်ဖိုးမှန်ကို သိမြင်နိုင်ရဲ့လား ဆိုတာကို သိချင်စိတ်ရှိတာနဲ့ စမ်းသပ်ကြည့်တာပါ"လို့ ပြန်လည် ပြောပြပါတယ်။
အဲဒီအခါမှာ လူယုံတပည့်ဟာ သူဌေးကြီးရဲ့ ရည်ရွယ်ချက်ကို သိနားလည်သွား သလို သူဌေးကြီးကလည်း ငယ်သူငယ်ချင်းဆရာတော် ဓမ္မာနန္ဒမှာကြားခဲ့တဲ့စကား (၃) ခွန်းရဲ့ အဓိပ္ပါယ်ကို သဘောပေါက်သွားပါတယ်။ "သြော်.. တန်ဖိုးသိသူ ဟာ တန်ဖိုးရှိတယ် ဆိုတာ တယ်မှန်ပါကလား၊ တကယ်တော့ ငါလည်း စိန်၊ ရွှေ၊ ငွေစတဲ့ လောကီရတနာတွေရဲ့ တန်ဖိုးလောက်ကိုသာ သိမြင်နိုင်တာပါ။ လောကကုတ္တရာ ရတနာတွေရဲ့ တန်ဖိုးကိုတော့ မသိမြင်နိုင်သေးပါဘူး။ ဒါကြောင့်သာ ဆရာတော် ဓမ္မာနန္ဒက "တရားသိသူဟာ တရားရှိတယ်"လို့ မိန့်တော်မူခဲ့တာပေါ့။ ဒီနေ့ကစပြီး ငါဟာ လောကုတ္ဆတရာ ရတနာတွေရဲ့ တန်ဖိုးမှန်ကို သိမြင်နိုင်တဲ့ သူဖြစ်အောင် ကြိုးစားအားထုတ်တော့မယ်"လို့ သန္နိဋ္ဌာန်ချမှတ်လိုက်ပါသတဲ့။
ဒီ ဓမ္မပုံပြင်ကလေးက "ရတနာကို ရတနာလို သဘောထားနိုင်မှ ရတနာရဲ့တန်ဖိုး အပြည့်အ၀ ရတတ်ပုံကို" ဖော်ပြထားလိုတာပါ။ ရတနာတွေကို ထိုက်တန်အောင် မဆက်ဆံနိုင်ရင် ရတနာတွေနဲ့ လွဲရတတ်ပါတယ်။ ရတနာကုန်သည်တွေကတော့ "ရတနာတွေကို တန်ဖိုးမှန်အောင် မဖြတ်တတ်ရင် လာဘ်ကန်တတ်တယ်"လို့ ဆိုပါ တယ်။ ယခုအခါ အမြတ်ဆုံးရတနာသုံးပါနဲ့ တွေ့ကြုံဆုံနေကြပေမယ့် ပုံပြင်ထဲက ဖရဲသီး သည်လို ဖရဲသီး(၉)လုံးလောက်ပဲ တန်တယ်လို့ ထင်ကြသူတွေဟာ အပြင်မှာလည်း တကယ်ရှိပါတယ်။ လောကီရတနာတွေနဲ့ လွဲရတယ်ဆိုရင် တစ်ဘ၀၊ တစ်ခန္ဓာပဲ နစ်နာတတ်တာပါ။ လောကုတ္တရာ ရတနာတွေနဲ့ လွဲသွားလို့ကတော့ သံသရာနဲ့ချီပြီး ဆုံးရှုံးနစ်နာကြမှာပါ။ ပုထုဇဉ်ဘ၀ရဲ့ အမိုက်အမဲ၊ အလွဲအမှားတွေကြောင့် သံသရာမှာ နစ်နာခဲ့ရတဲ့ ရပိုင်ခွင် အဆုံးအရှုံးတွေဟာ အသင်္ချေအနန္တပါ။
တကယ်တော့ လောကုတ္တရာ ရတနာတွေဆိုတာ ဘုရား၊ ရဟန္တာ အရိယာ သူတော်ကောင်းတွေရဲ့ ရင်တွင်းထွက် ကျောက်မျက်ရတနာ တွေပါ။ ကမ္ဘာတွေ အသင်္ချေချီကာ ဖြစ်တည်လာခဲ့တဲ့ ပါရမီကောင်းမှု အစုစုတွေရဲ့ အဆီအနှစ်သြဇာတွေပါ။ ဒါကြောင့် လောကုတ္တရာရတနာ ဆိုတာ လောကီရတနာတွေနဲ့ မနှိုင်းယှဉ်သာအောင် ကြီးကျယ်မြင့်မြတ်လှပါတယ်။ ဒီ ဘုရား၊တရား၊သံဃာ ရတနာမြတ်သုံးပါးသည်သာ "လောကဓာတ် တစ်ခုလုံးမှာ အမြင့်မြတ်ဆုံးသော မင်္ဂလာ၊ အဖိုးတန်ဆုံးဖြစ်သော ရတနာ၊ အစစ်အမှန်ဆုံးသော ကိုးကွယ်ရာ"လို့ အသိဉာဏ်နဲ့ လက်ခံပြီး သဒ္ဓါတရားနဲ့ မြတ်နိုးယုယစွာ နှလုံးသားမှာ ပိုက်ထွေးထားနိုင်ခြင်းဟာ ပုထုဇဉ်လူသားတစ်ဦး အဖို့တော့ တကယ့်ကို ကြီးကျယ် ခမ်းနားတဲ့ ဖြစ်ရပ်တစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။
"မေတ္တာရှင်(ရွှေပြည်သာ) - စာရိတ္တသတ္တိ စာအုပ်မှ ကောက်နှုတ်ချက်များ"
သတ္တိသုံးမျိုးက ကာယသတ္တိ၊ စိတ္တသတ္တိ၊ စာရိတ္တသတ္တိတို့ပါဘဲ။
ဒီသုံးမျိုးထဲမှာ ထိုးတယ်၊ ခုတ်တယ်၊ ရိုက်တယ် ဆိုတဲ့ ကာယသတ္တိဟာ အလွယ်ဆုံးပါဘဲ။
ဒီထက်ပိုခက်တာက စိတ္တသတ္တိပါ။ကိုယ်က အနိုင်ယူလို့ရရဲ့သားနဲ့ အနိုင်မယူဘဲ အလျှော့ပေးလိုက်တာမျိုးပါ။
ဒီနှစ်ခုထက် ပိုခက်သွားတာကတော့ စာရိတ္တသတ္တိပါ။
ရာထူး၊ အာဏာ၊ ဥစ္စာ စတဲ့ အရာအားလုံးကို မတရားတဲ့နည်းနဲ့တော့ ဘယ်တော့မှ မယူဘူးဆိုတဲ့ သတ္တိမျိုးပေါ့။
"သတ္တိသုံးမျိုး" စာ-၁၅ မှ ကောက်နှုတ်ချက်
"သားရေ လူသေပုပ်၊ လူရှင်ပုပ်လို့ အပုပ်နှစ်မျိုးရှိတယ်။
မြေကြီးထဲမှာ ပုပ်နေတာဆိုတော့ အပေါ်ကို ဘာနံ့မှမထွက်တော့ ဘယ်သူကိုမှ ဒုက္ခမပေးဘူးပေါ့။"
"လူရှင်ပုပ်ဆိုတာကျတော့ ဆိုးတယ်၊ သူများကို ဒုက္ခပေးတယ်၊
အကျင့်စာရိတ္တပျက်စီးနေတဲ့သူတွေဟာ ရှင်ရက်နဲ့ ပုပ်နေသူတွေပဲပေါ့။
သူ့ရဲ့ အကျင့်စာရိတ္တပျက်စီးမှု အပုပ်နံ့တွေက သူရောက်တဲ့ နေရာတိုင်းမှာ နံစော်နေတာပဲပေါ့။
ဒါကြောင့် လူတိုင်းက သူနဲ့ မတွေ့အောင် ဝေးဝေးရှောင်ကြတယ်။"
"မတတ်သာလို့ ဆက်ဆံရပြီဆိုရင်လည်း ဟိုမယုံရ၊ ဒီမယုံရနဲ့ အင်မတန် ဒုက္ခရောက်ကြရတာပေါ့။
ဒါကြောင့် ငါ့သား မိမိကိုယ်ကို သေမှပဲ ပုပ်ပါစေ။
"အဇ္ဇျတ္တတိုက်ပွဲ" စာ-၃၂ မှ ကောက်နှုတ်ချက်
ဆင်းရဲခြင်းရဲ့ အကြောင်းက နှစ်မျိုးရှိတယ်။
(၁) မလှူခဲ့လို့လဲ ဆင်းရဲတယ်။
(၂) သူတစ်ပါးဥစ္စာ ခိုးခဲ့လို့လဲ ဆင်းရဲတယ်။
မလှူခဲ့လို့ ဆင်းရဲတဲ့သူက ဝီရိယနဲ့ ကြိုးကြိုးကုတ်ကုတ်ရှာဖွေရင် မချမ်းသာတောင် လူတန်းစေ့အောင် အဆင်ပြေသေးတယ်။
သူတစ်ပါးဥစ္စာခိုးခဲ့လို့ ဆင်းရဲတဲ့သူကတော့ ဘယ်လောက်ရှာရှာ မွဲနေမှာပဲတဲ့၊
ဘာဖြစ်လို့လည်း ဆိုတော့ သူရှာလို့ရတဲ့ စည်းစိမ် ဥစ္စာတွေကို ရေ၊မီး၊မင်း၊ခိုးသူ၊မချစ်မနှစ်သက်တဲ့ အမွေခံဆိုးဆိုတဲ့
ရန်သူမျိုးငါးပါးတစ်ပါးပါးက မပျက်ပျက်အောင် ဖျက်ဆီးတတ်လို့ပဲ။
"အူမတောင့်သော်လည်း သီလစောင့်သူ" စာ-၆၁ မှ ကောက်နှုတ်ချက်
မည်သူမဆို အတ္တနှင့်ပရ လွန်ဆွဲဘူးကြသည်သာ ဖြစ်၏။
ထိုလွန်ဆွဲပွဲတွင် သူတော်ကောင်းစိတ်ရှိသူသည် ပရဟိတကိုသာ အနိုင်ပေးတတ်ကြသည်။
"အူမတောင့်သော်လည်း သီလစောင့်သူ" စာ-၆၂ မှ ကောက်နှုတ်ချက်
အာဒိန္နာဒါန သိက္ခာပုဒ်ကို စောင့်စည်းထိန်းသိမ်းတဲ့ နေရာမှာ
သူတစ်ပါးမပေးတာကို မယူရုံ ထိန်းသိမ်းတာက အပေါ်ယံလောက် ထိန်းသိမ်းတာလို့ဘဲ ခေါ်တယ်။
သူတစ်ပါးခိုးနေတာကို ဆက်မခိုးဖြစ်အောင် ကာကွယ်ပေးရဲမှ
အာဒိန္နာဒါန သိက္ခာပုဒ်ကို အနှစ်သာရ ထိရောက်အောင် စောင့်ရှောက်ထိန်းသိမ်းတယ်လို့ ခေါ်တယ်။
"ခြင်္သေ့နှင့် တူသောလူ" စာ-၆၆ မှ ကောက်နှုတ်ချက်
ဘယ်မကောင်းမှုကိုပဲ လုပ်လုပ် လုပ်တဲ့သူဟာ ဘေးလေးမျိုး ကျရောက်တတ်တယ်။
(၁) ပရာနုဝါဒဘေး - သူတစ်ပါးက စွပ်စွဲကဲ့ရဲ့ခြင်း။
(၂) အတ္တာနုဝါဒဘေး - ကိုယ့်ကိုကိုယ် စွပ်စွဲကဲ့ရဲ့ခြင်း။
(၃) ဒဏ္ဍဘေး - ထောင်ဒဏ်၊ သေဒဏ်အပြစ်ချခံရခြင်း။
(၄) ဒုဂ္ဂတိဘေး - သေပြီးနောက် အပါယ်ဘုံသို့ ကျရခြင်း။
ဒီလေးမျိုးထဲမှာ မကောင်းမှုလုပ်ပြီး သူတစ်ပါးမသိအောင် ဖုံးကွယ်နိုင်ရင်
ကိုယ့်ကိုယ်ကို ငါ့မတရားလုပ်စားနေတဲ့ သူခိုးကြီးပါလားလို့ စွပ်စွဲကဲ့ရဲ့တဲ့ အတ္တာနုဝါဒဘေး၊
သေပြီးတဲ့နောက် အပါယ် လေးပါးကျရတဲ့ ဒုဂ္ဂတိဘေးကိုတော့
ဘယ်လိုမှ ရှောင်လို့ မရတော့ပါဘူး။
ဒါနပြုခြင်းသည် ဥစ္စာရွှေငွေ၌ ကပ်ငြိတွယ်တာနေသော လောဘကို
အလှူရှင်အဖြစ် ထင်ပေါ်လိုခြင်း၊ လူသိများလိုခြင်းသည်
ဥစ္စာစည်းစိမ်၌ တွယ်တာကပ်ငြိနေသော လောဘကို ပယ်သတ်ပြီး
နာမည်ကြီးလိုသော လောဘကို ပြန်လည်ဖက်တွယ်လိုခြင်းသည် မြင့်မြတ်သော ပါရမီရှင်တို့၏
ကျင့်စင်ဖြစ်သော ဒါနကို ကုန်သည်ဆန်ဆန် အရောင်းအဝယ်လို သဘောထားရာ ရောက်ပေသည်။
"သိမ်မွေ့သော လောဘ" စာ-၁၃၇ မှ ကောက်နှုတ်ချက်
သိပ်ချစ်တတ်တဲ့… ကျမ ….
ချစ်တဲ့မောင်ရဲ့… ရုပ်သေးရုပ် ကျမ…
မောင် ကြိုးဆွဲသလို.. ကခဲ့ပါတယ်...
မောင် ပျော်စေချင်… ပြုံးခဲ့တယ်...
မောင် မဲ့စေချင်… ငိုခဲ့ပါတယ်......။
ခုတော့… မေ့သွားပြီလား မောင်…
ဟိုစဉ်တုန်းက.. အရိပ်လို လိုက်ပါ…
ခုတော့.. ဘယ်ဆီမှာလဲ…. မောင်…
မောင့်ကို သိပ်ချစ်တတ်တဲ့ အပြစ်...
ရုပ်သေးရုပ်လေး.. ကျမမှာ.. ဖြစ်ခဲ့ပြီလားမောင်…..။
ခုတော့ ဘယ်မှာ ရှာရမှာလဲ….
ကမ္ဘေကမ္ဘာအဝေး… မောင် ပြေးလို့လဲ…
လိုက်ရှာနိုင်တဲ့ အခြေ … ကျမမှာ… ရှိမနေခဲ့ပါလားမောင်ရယ်.....။
ကျမက.. ချစ်တဲ့ မောင်ရဲ့… ရုပ်သေးရုပ်ကလေးလေ…
မောင် ရွေ့စေချင်မှ.. ကျမ လှုပ်ရမှာ…
မောင် ပျော်စေချင်မှ .. ကျမ ပြုံးရမှာ...
မောင် မုန်းစေချင်မှတော့.. ကျမ မေ့ရတော့မှာလေ…..
နောက်ဘ၀ဆိုတာ.. ရှိခဲ့မယ် ဆိုရင်တော့...
ရုပ်သေးရုပ်လေး ကျမ .. မဖြစ်ချင်တော့ပါ မောင်...
မောင် ထာဝရ.. တမ်းတ မြတ်နိုးမဲ့.. ယမင်းရုပ်လေး ဘ၀မျိုးသာ…
ကျမ… ရလိုပါတော့သည်မောင်…….။ ။
ကိုယ်ဖြတ်သန်းခဲ့တဲ့ ဘဝကို တစ်ချက်လောက် စောင်းငဲ့ ကြည့်လိုက်ပါ....။
တစ်ခါတစ်လေ မိတ်ဆွေ အပေါင်းအသင်းတွေနဲ့ပျော်ပျော်ပါးပါး ဟေးလားဝါးလား...။
ချစ်သူ ခင်သူတွေနဲ့ကြည်ကြည်နူးနူး....။
တော်လိုက်တာ ၊တတ်လိုက်တာနဲ့ကိုယ့်စွမ်းဆောင်ချက်တွေနဲ့ကိုယ့်အရည်အသွေးတွေကို ချီးမြှောက်ကြ ၊ဂုဏ်ပြုကြ.....။
လက်ခုပ်သံတွေ ၊မီးရောင်စုံတွေနဲ့ဝှဲချီးမြှောက်စားကြတာများ ငါလိုလူ ဇဗ္မူမှာ ရှိရိုးလားလို့နားထင်သွေးရောက် ဂုဏ်မောက်ခဲ့တဲ့
နေ့ ရက်တွေလည်း ရှိဖူးမယ်...။
ဘာလုပ်လုပ်အောင်မြင် ၊ဘာပြောပြော အကောင်းမြင် ...။ ပိုက်ဆံငွေကြေးနဲ့စည်းစိမ်ဥစ္စာ တွေ သူ့ အထွာနဲ့ သူ ...။
ကျေနပ် ပိတိ ဖြစ်နေရတဲ့နေ့ ရက်များလည်း ကြုံဖူးမယ်......။
အကောင်းလောကဓံတွေ ကြုံခဲ့ရင် ဘဝဆိုတာ နှစ်သက်ပျော်မွေ့ ဖွယ်ရာလို့ ထင်မှတ်...။
သံသရာ အဆက်ဆက်တောင် လူဖြစ်ဖို့ ဆုတောင်း အကြောင်းကောင်းတဲ့ နေ့ ရက်များဟာ မင်္ဂလာအတိပေါ့ဗျာ.........။
ဆင်းရဲဒုက္ခတွေဟာ အပေါင်းအဖော်နဲ့လာတတ်တယ် ဆိုတဲ့ စကား ကြားဖူးမှာပေါ့...။
ကံဆိုးမ သွားရာ မိုးလိုက်လို့ ရွာ သတဲ့...။
စိတ်ညစ်လို့ မြစ်ကမ်းပါး သွားထိုင်ရင်တောင် သပွတ်အူနဲ့စာကလေးသိုက် မျောတာ ကြုံရဦးမယ်...။
နူရာဝဲစွဲ... လဲရာ သူခိုးထောင်း..။
ကံကြမ္မာဆိုးတွေ ဝုန်းဒိုင်းဆင်တော့ ဘဝကို ငရဲခန်းတွေလို့ ထင်....။
ဒေါသတွေ ..အငြိုးတွေနဲ့လောကကို မကောင်းမြင် ..၊
ရေခပ်မကြုံ ထင်းခွေကြုံ မှာပေါ့လို့ကြိမ်းဝါး .... ခါးသီးတဲ့ နေ့ ရက်များကို ဖြတ်သန်း ....၊
လူ့ သက်တမ်းကို ချုံ့ ပစ်ချင်တဲ့စိတ်ရိုင်းတွေနဲ့ကိုယ့်သမိုင်းကိုယ်လည်း ရေးဖူးကြမယ် ထင်ပါရဲ့ .......။
အကျိုးမကောင်းတာဟာ အကြောင်းမကောင်းခဲ့လို့....။
သံသရာအဆက်ဆက် ဘဝအထွေထွေက အကြောင်းမကောင်းတာတွေ ပြုဖူးခဲ့တဲ့ကံကြောင့် အကျိုးပေးချိန်မှာ ပေးနေတာလေ...။
တမာပင် စိုက်ခဲ့လို့ တမာသီးစားရတဲ့ ခါးသီးတဲ့ ဘဝအကြောင်းကို မြတ်ဗုဒ္ဓဟောကြားတဲ့
အကြောင်းအကျိုးဆက် ပဋိစ္စသမုပ္ပါဒ် မှာ တွေ့ ရမှ သံဝေဂရ....။
လူ့ ဘဝရဲ့ အနှစ်သာရကို ဆင်ခြင်မိပါရဲ့ ......။
တောင့်တမှုနဲ့ကြောင့်ကြမှု
လောဘနဲ့ဒေါသ
မောဟအထွေထွေနဲ့အဝိုင်းပြေးပြေးနေတဲ့ လူ့ လောကကို တွေးမြင်မိမှ ...
ပုထုဇဉ်ဘဝဆိုတာ အရူးတွေလိုပါလားလို့ခပ်ရေးရေးလေးမြင်မိပါရဲ့ ...။
Some Favorite Quotations!!
ကြွက်တက်ခြင်း အတွက် အိမ်တွင်း ဖြေရှင်းနည်း
Face book မှတဆင့် လူတို့၏ စိတ်နေသဘောထားမျာကိုး ခန်...
၁၀၀% ပြည့်စုံတဲ့ မိန်းကလေးတစ်ယောက်ကို တွေ့လိုက်ရခြ...
သွေးတိုးကျစေရန် ပြုလုပ်သင့်သော ကိုယ်လက်လှုပ်ရှားမှုမ...
ဖေမြင့်ရေးတဲ့ စာအုပ်တစ်အုပ်ထဲက ... Precious Words
လူတို့ရဲ့ အရိုးကို စေတီ တည်ကောင်းပါသလား
အချိန်ရမှ စိတ်ထဲက ခံစားပြီးဖတ်ပါ သူငယ်ချင်း
Ta Kal So Yin A Chit Pal Lo Tal
The 'LOVE' that TEARS know
Bye with LOVE.......
"မေတ္တာရှင်(ရွှေပြည်သာ) - စာရိတ္တသတ္တိ စာအုပ်မှ ကောက်န...